Chishanu, May 14, 2021
musha nyika dzakabatana Singers Kanye West Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Yedu Kanye West Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yake Yehucheche, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Nyaya dzerudo, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Kuongorora kwacho kunosanganisira nhoroondo yeupenyu hwaKanye pamberi pezita rekuremekedzwa uye rake remhuri. Kunyanya zvakadaro, akawanda OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanyori vakabudirira venguva yake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Kanye West's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Kanye West Yevacheche Nyaya - Hupenyu hwepakutanga uye Mhuri kumashure:
Kutanga kuenda, iyo American Celeb inonyanyo kuzivikanwa nezita rezita rezita "Yeezy". Kanye Omari West akazvarwa pazuva re8th raJune 1977 muAtlanta, Georgia, United States.
Ndiye ega mwana akazvarwa kuna amai vake Donda West (mudzidzisi weChirungu) uye kuna baba vake Ray West, (wekutanga mutema foto mutori wenhau weAtlanta Journal-Constitution).
Kanye akakura muSouth Shore Chicago (707 miles kubva pakuberekwa kwake) naamai vake mushure mokunge mubereki wake akaparara paakanga ari 3 yemakore chete. Somugumisiro, akapedza chikamu chakanaka chehucheche hwake naamai vake uye akashanyira baba vake munguva dzekupedzisira.
Kukura kumhenderekedzo yekumaodzanyemba, Young Kanye akatanga kufarira zvekare zvigadzirwa kusanganisira kunyora nekunyora nhetembo. Akanyora nhetembo yake yepakutanga ye5 uye akaitevera nezvimwe zvidimbu zvinonakidza zvaive zvakarondedzerwa zvakashata zvemiti yakasviba munguva yechando.
'Iyo Miti Iri Kusviba Nhema'
Anoyeuka amai vaKanne nezvehunyanzvi hwekunyora kwemwanakomana wavo.
Chisungo icho Kanye akagovana naamai vake chakasimbiswa nemakore ayo vaviri vacho vaionekwa senge risingapatsanurike vaviri.
Chokwadi, ivo vaisaparadzaniswa sezvo Donda West akatora mwanakomana wake Kanye (ane makore gumi) kuenda naye kuChina kwaakadzidzisa mutauro weChirungu sechikamu chechirongwa chekuchinjana kuyunivhesiti.
Hazvina kutora nguva refu vasati vadzokera kuSouth Shore uko Kanye akatanga kubvarura mugiredhi rechitatu. Panguva yaaive nemakore gumi nematatu, Kanye anga atonyora rwiyo rwake rwekutanga uye ainakidzwa ne studio nguva nemugadziri akasimbiswa, HAPANA ID uyo akamurayira mukugadzira kurira.
Kanye West Dzidzo:
Chinozivikanwa pakati pekufambira mberi kwekudzidza kwaKanye yaive yake yekusekondari dzidzo kuPolaris High School kwaakapedza muna May 1994.
Tumira chikoro chesekondari akaona Kanye akachengetedza kudzidza kunodzidza kuChicago kuAmerican University of Arts.
Kunyange zvakadaro, akasiya chikoro mu2000 kusvika pakuvhunduka kwaamai vake avo vairemekedzwa. Achipa zvikonzero nei akabvisa chikoro chekambani yakatsanangura kuti:
“Zvakange zvaridzwa mumusoro mangu kuti koreji ndiyo tikiti rehupenyu hwakanaka. asi zvimwe zvibodzwa hazvidi koreji. zvainge zvakanangana nekuva neushingi hwekugamuchira zvauri, pane kutevedzera nzira yawakarongerwa neveruzhinji ”
Kanye West Biography - Basa Rinovaka:
Kubuda kwekorojiji kwakazarura firiji kuti Kanye afunge hupenyu hwake hwose mumhanzi iyo yaida chaizvo kuchinja kuva basa. Akatanga kuburikidza nekushanda mushure mezviratidzo semuchengeti wemhanzi ane tarenda iro basa rake rakanga rakanyanya kupfuura rakasiyana.
Achifambisa kutengeserana kwake kuNew Jersey muna 2001, Kanye akabata kufarira kwaJay-Z, iye wekutanga mushandirwi mukuru. VaDuo vaive nehukama hwekushanda hunobatsira hwakaona mukurumbira waKanye uchisimuka nekugadzirwa kwenziyo yaJay-Z "Izvi hazvigone kuve hupenyu", rwiyo rwakaratidza pane 2000 album Dynasty: Roc LA Familia.
2001 raive gore rakakosha kuna Kanye uyo akabudirira mukugadzira nekuburitsa nziyo ina paJay-Z's The Blueprint, rap album yakanyanya kutaridzirwa kuve yakakurisa nguva dzese.
Kubudirira kwaKan West semugadziri kwakaita zvakawanda zvakanaka pakuvimba kwake. Kune Kanye, Kumisikidza zvinotarisisa zviitiko zvakakura kwaireva kubuda kubva ku backroom kuti uve rapper.
Zvisinei, Roc-A-Fella zvinyorwa zvaakashandira zvakakundikana kumusimudza seanoridzidzira pamusana pemaonero ake. Kutaura neAnguva Magazini makore akazotevera, Jay Z, Co-founder weRoc-A-Fella zvinyorwa zvakayeuka kuti:
"Vanorova panguva iyoyo vaizivikanwa nekumhanya-mhanya, kusimuka kubva mumadota uye kurwisa mikana yese kuti vagadzikane muindasitiri, asi kwakauya Kanye asina kumbobvira ave nehupenyu hwakakosha, zvaive zvakaoma chaizvo kuona kuti achasvika kupi semurapi ”.
Hapana anozvitsanangura zviri nani kupfuura nyanzvi yemagwaro, Geordie uyo anoti:
"Pfuti hombe dzeHip-Hop panguva iyoyo vaive vanhu vaitambura uye vakaita kuti vamwe vatambure, vanhu vakabayiwa nepfuti, vaitofanira kutengesa zvinodhaka kuti vararame uye zvinoshungurudza zvakanyanya, vanhu vaiziva zvazvinonzwa sekushaya chinhu. Kanye, kune rumwe rutivi, aigara naamai vakadzidza chaizvo uye akarerwa nenzira kwayo. Aingoda kubhururuka pachikuva asingataure nezvakange zvave kuitika kwaari ”
Zvisinei, Roc-A-Fella akamanikidzwa kusaina Kanye semuyeuchidzi mu 2002 zvikuru nokuti haana kumbobvira atadza kurasikirwa nemabasa ake semuiti.
Kanye West Untold Biography - Njodzi Inouraya:
Mwedzi miviri mushure mekunge Kanyeki ainge asayirwa semugumisiro akabatanidzwa mune imwe njodzi inouraya iyo yakaita kuti iite upenyu hwake. Chiitiko ichi chakaitika kana Kanye aine musoro-akanganisa nemumwe motokari achityaira kumba mushure mekunge zvidzidzo zvekunyora.
“Chakanga chiri chiitiko chinorwadza. kukuvara kwandakaita kwakabata nekufema kwangu. Paive neropa rakawandisa uye mumhuno zvichibuda mumuromo mangu. ”
Tsaona iyi yakachinja muviri wake wepanyama (kumeso kwake) sezvo shaya yake pakutanga yakanga isina kugadzikana uye yaifanira kuvharwa newaya, chiitiko icho chaizozivisa nzira yake "Kuburikidza neWaya".
Kanye West Bio - Kumuka Mukurumbira:
Kanye West had his breakthrough as a rapper with the release of his debut studio album The College Dropout. Iyo album yaiva nemitambo yakawanda yakanyorwa naKany apo ichidzoka kubva kune Accident yakabudiswa muna February 2004.
Yakatarisa paNo2 pane chati yeBillboard Hot 200 iyo yakagadzirisa zvakananga Kanye 10 Grammy kusarudzwa kwaakakunda mibairo mitatu, iyo inosanganisira Best Rap Album. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kanye West Anoda Hupenyu:
Kanye West yakave nehukama hwehukama pakati pegore 1996 kusvika 2012. Tinokuunzira mashoma mashoma Anotaridzika muKyan nhoroondo yekufambidzana.
Kutanga pakati pevakawanda ndiSumeke Rainey, runako rwakasviba rwakanamatira pamwe neKyan paakanga asiri munhu kumashure sa1996. Zvinosuruvarisa, ndiye akabatwa nekukwira kwaKanye mukurumbira paakabata tsunami basa rake rekuvaka.
Paakazova nyeredzi, Kanye akange ane ukama ne fashion designer Alexis Phifer. Doo akawana zvakanaka pamwe chete kuti Kanye akadzoka kwaari kune imwe chikwata cheukama mushure mekunge aputsa naBrooke Crittendon.
Brooke Crittendon (akafananidzirwa pasi neKannie) akanga ari mutungamiri mukuru paTVV News uyo akadaro Kanye pakati pe2005-2006. Hwange hwakanga huri hukama hukuru Kanye hwakambove hwakambosvika kuna Alexis Phifer.
Kanye akaronga kuna Alexis Philer uyo waaive nehurongwa hwekugara naye mai vake vasati vafa vakamutumira kugomba rakadzikadzika, chiitiko chinosuwisa icho chakaona vaviri vacho vapatsanurwa nekuda kwekusawirirana kusingawirirane pamuganhu wepfungwa dzaKyan.
Kubva pamusana pekurasika kwake kusingagoneki Kanye akawana nyaradzo muAmber rose (inoratidzika pasi apa naKayne) waakagara naye pakati pe2008-2010 asati asangana nomudzimai wake, Kim Kardashian.
Kanye West Biography Chokwadi - Kuroora Kuna Kim:
Kanye naKim vakange vava shamwari kwemakore vasati vambotanga kufambidzana neshamwari mu2012. Vakanga vari shamwari Kanye havana kumbobvumira kubvuma manzwiro ake pamusoro paK Kim (akabva aroorwa naKris Humphries) uyo waakataura munziyo yake "Theraflu":
(Kanye aireva pal pal yake Jay-Z muridzi weNew Jersey Nets, aimbove murume waKim murume waKris Humphries akatamba.)
Kuberekwa kweNorth West kwakatora hukama hwevabereki vake kusvika pakureba kwakanyanya sekufunga kwakaita Kanye kuna Kim pazuva rake rekuzvarwa makumi matatu nematatu musi wa33 Gumiguru 21 kuAT&T Park muSan Francisco.
Ukama hwavo hwakaropafadzwazve nemamwe vana vaviri, Saint West (akaberekerwa 2015) uye Chicago West (akaberekerwa pamuviri munaJanuary 2018).
Kanye West Hupenyu Hwemhuri:
Kanye West ndiye oga mwana akaberekwa nevabereki vake. Tinokuudzai nezvemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Ray West ndiye baba vaKan. Ray ainyanya kushanda semutori wenhau uye aive nehunhu muhunyanzvi hwake. Akaparadzanisa nzira naamai vaKyan muna 1980 asati aroora mukadzi wake, Cheryl Carmichael West.
Kanye became a close to his father after the death of his mother and the duo have stayed close since. Zvechokwadi, Kanye ano anorumbidza baba vake nekukurudzira kuvimba kwake muMusic and Fashion.
Pamusoro paamai vake: Donda West ndiamai vaKanye. Akanga ari purofesa weChirungu kwemakumi emakore asati abva mu2004 kubatsira Kanye mumhanzi basa nekushanda munzvimbo yeanomumiririra.
Akafa munaNovember 2007 pasi pemakakatanwa nemamiriro ezvinhu. Kunyange zvazvo vamwe vachifunga kuti akafa nekuda kwezvinetso mushure mekunge apinda mumakwikwi ekuvhiyiwa kwezvigadzirwa, coroner inotenda kuti akafa nekuda kwemoyo wakagara uripo
Rufu rwaDonda rwairova Kanye kwaaireva pasi rose. Iye, zvakadaro, akauraya amai vake nekuzivisa kusikwa kwaDonda, yekugadzira dhizaini zita rakadanwa naamai vake. Maererano naKanye:
"DONDA ikambani inogadzira iyo inosimbisa vanofunga vanoshamisa uye kuvaisa munzvimbo yekugadzira kuzadzisa zviroto uye mazano avo."
Kanye West Untold Biography Chokwadi - Iyo Chiremba Chiremba:
Kanye ndiye akagamuchira chinokudzwa doctorate kubva kuChikoro cheArt Institute muChicago. Chiremba chakauya makore makumi maviri mushure mekunge Kanye abuda muChicago's American University of Arts.
Kunyange zvazvo Kanye akanga achitya pamhemberero iyo yaakaona akapfeka muchipfeko cheChikoro, akakwanisa kupa mvumo yake yekugamuchirwa achisimbisa kuti aizoshandisa kukudzwa kwehupenyu huri nani.
Kanye mudzimai waKim Kardashian anga asipo pamhemberero iyi nekuda kwekunetsekana kwebhizinesi muBrazil. Iye, zvakadaro, akaita wekukwazisa tweet kune new Dr.
Dr. Kanye West !!!!!!! Ini ndinodada newe mwana uye ndinoziva kuti mai vako vangadadawo futi !!!! 🎓 pic.twitter.com/dgcj3uUvvq
- Kim Kardashian West (@KimKardashian) Dai 11, 2015
Kanye West Mazita emazita:
Kanye has over the course of her successful career adopted many nicknames and aliases, we bring you some of her many nicknames and their sources in brackets
Pablo, Yeezy, Yeezus, Ye, Mr West, Kan The Louis Vuitton Don (Kanye - Better Than Yours), The Don (Vhidhiyo), Martin Louis the King, Jr. (Vhidhiyo), KanYeezy (Jay-Z - Lucifer), The LeBron of Rhyme (Kanye - DIAND), K-Rock (Kanye - Drive Slow), Omari / 'Mari (Kanye - Mumwechete), The Black Zac Efron (Kenny West paCleveland Show), Evel Kanyevel (Kanye - Bata iyo Sky vhidhiyo), Swag King Cole (Kanye - Cold
Kanye West Wife Kupamba:
Mukadzi waKanye akabirwa pfuti munaGumiguru 2016 kuimba yake yepamusoro muParis. Mbavha dzaive dzakapfeka yunifomu yemapurisa dzakapfuudza concierge mufurati yakavabvumira kupinda mukati.
Akazo sungwa maoko nemabhanditi akaita nzira yavo kuKim's Flat. Vakapinda mumba vakabata vakanongedzera pfuti. Kim aisafanira kusangana nevarume vane zvombo sezvo aisungirwa kuchinangwa chavo chekusunga maoko nekumukiya muchimbuzi.
Kutaura nezvechiitiko Kanye akaonga Mwari nekuda kwezvipo zvishoma sezvaanoti:
“Ndingadai ndisina kuzvikanganwira kana humbavha hwacho hwaipfuura nekungoba zvidimbu zvebwe. Kunyange zvakadaro, ndinonzwisisa nyaya dzekuchengetedza dzakatarisana nemhuri yangu. Dzimwe nguva zvinoshungurudza kufunga kuti munhu ane mukurumbira sezvo mutungamiri wenyika achiri kufanira kuchengetedza ".
Kanye West Zvemunhu Chokwadi:
Kanye West has the following traits to her personality
Kutenda: Kanye is one whose confidence made him the star that he is today. Apo paakaita chibharo chake pakupwanya haana kumbozeza kuti azivise chinangwa chake chekuunza kuchinja kune maitiro akange aine chokwadi.
Rwiyo rukuru pane iyo nguva rwaive 50 Cents uyo akauya mukurumbira akapfeka bhachi risingadziviriri bara asi Kanye akabuda akapfeka polo yepingi uye achipfeka kunge teddy bere.
Rappers panguva iyoyo vakataura nezvekuuraya vanhu nekutengesa zvinodhaka, Kanye akauya achinyengedza nezvekutengesa mbatya kuThe Gap (kwaakange aine chiitiko chipfupi chekushanda).
Muchidimbu, Nepo vamwe vaimbi panguva iyoyo vakatasva nhoroondo yavo ye gangsta, Kanye akatanga chirongwa chitsva che rap chakanangana neunyanzvi uye nehunyanzvi hwekugadzira. Zvikuru saka mugadziri aigara achizvidana ega seyekugadzira kana Lyrical genius izvo zvisinga tsanangurike zvakapihwa rake rekodhi reanotyisa maalbum.
Kunzwira tsitsi: Kanye ndiye aigona kuenda kure kure kutsvaga rutsigiro uye kururamisira vanhu vanovada. Izvi zvakaratidzwa panguva yekuonekwa kwake pamwe nemuseki Mike Meyers kukumbira zvipo kune vakawirwa nedutu Katrina (kunyanya vatema) musi wa2 Ndira waSeptember 2005.
Mike akaomerera kune script pane teleprompter mukuita chikumbiro chake chekupa zvipo, zvisinei, Kanye akaenda kunetseka nokucherechedza kuti:
“Iwe, ini ndiri kungo adlib zvishoma. George Bush haana basa nevanhu vatema ”.
Chokwadi, zvakataurwa naKyan zvaive zvakakosha uye zvakanaka. Uye zvakare, rwiyo rwake maDiamonds anobva kuSierra Leone akaburitswa muna 2005 kudonongodza dambudziko revana mu West African nyika, iyo kubva 1991 yakamanikidzwa kuvhara dhiyamani dzenharo uye kufa hondo dzevagari vemo yakapihwa mari navo Vhidhiyo yemumhanzi inopera nemavara anoti, "Ndapota tenga kukakavara-pasina madhaimani".
Zvimwe Zvizhinji Zvechokwadi:
Energetic: Idaidze kuve nesimba kana kupererwa, chero nzira, Kanye ndiye anozviita iye oga kuti abudirire. Vazhinji vanotenda kuti Kanye akaita basa rakakosha mukubatsira Jayz kugara mubhizinesi ivo vese vachishanda pamwechete mumazuva akanaka ekare. Muchokwadi, simba raaiita basa rake semugadziri naRoc-a-fella ndicho chikonzero nei rekodhi risingakwanise kubatsira kumusaina semurapi.
Zvinopesana: Kanye anoita kunge haakwanise kubatsira kupokana nezvimwe zvekutaura izvo zvakaita kuti vazhinji vatange kunetsekana nezve hutano hwepfungwa. Inozivikanwa pakati pezvirevo izvi ndeiyi: Makore e400 euranda aiva sarudzo, Ndakatengesa so yanguul kuna dhiabhori,
Asi Beyonce ane video yakanakisisa, Ndiri Mwari.
Kanye West Rekera Label:
Kanye West founded GOOD music, a record label and company company for artists and producers alike. Mashoko aya ane mazita makuru A-maitiro, zvose zvakapfuura uye zvemazuva ano zvinosanganisira Pusha-T, Big Sean, Kid Cudi, Common, John Legend, Teyana Taylor, Designer, kungoti vashoma.
Kanye akaitawo rimwe basa rekuunganidza pamwe nevamwe GOOD Music maartist. "Utsinye Zhizha" yaive yekushandira pamwe nenhengo dzemhuri YAKANAKA Music uye yakaburitswa mu2012.
Kanye West Fashoni Line:
Kanye West mugadziri wefashoni uyo foray yake mumafashoni anoteedzera mudzi wawo kusvika kumashure sa2005 paakazivisa kuburitswa kwake Pastelle Clothing mutsetse. Muna 2009, Kayne akabatana naNike pamutsetse wake we "Air Yeezys" weshangu. Mugore rimwe chetero zvakare, tambo yeshangu kubva pakubata kwake kwekutanga kubatana naLouis Vuitton yakaratidzirwa panguva yeParis Fashion Vhiki.
Akaenderera mberi nekuwana chibvumirano chepamutemo neAdhidas mu2013 uye muna2015 uyezve akaburitsa Mwaka 1 weye Yeezy Mwaka zvipfeko muunganidzwa neAdidas.
Kuburitswa kweAdhidas Yeezy Boosts kwakasangana nekugamuchirwa kwemusango sezvo mutsetse wakatengeswa kunze mune imwe maminetsi. Akaenderera mberi nekuburitswa nesadza remutsara wake wefashoni unopfeka nguva dzose kubva ipapo.
Kunyangwe Kanye's Yeezy mutsetse uri mukubatana neAdidas, maartist ane chigumbu neNike nekusamupa simba mukati mekambani mushure mekugadzira shangu yeNike yakabudirira. Maererano naKanye:
Ndaida Nike. Zvakanga zvichishungurudza kwandiri kuti ndiende Nike, asi vakaramba kundibvumira kuti ndiwane mari yepamusoro peshangu yangu uye ndaiziva kuti ndaiva neshangu inopisa kwazvo munyika
Kanye West Biography Chokwadi - Zvematongerwo Enyika:
Kanye West akaratidzira kutsigira kwake kukuru Mutungamiriri weUS, VaDonald Trump nekushanyira vaimbove Mutungamiri-vakasarudzwa muTrump Towers yake muManhattan, New York, nguva pfupi mushure mekukunda kwaTrump musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2016.
Sarudzo yake isingachinji yekutsigira VaTrump yakasangana nemanzwiro akasangana kubva munharaunda yevatema, indasitiri yemimhanzi uye chikamu chemuchinjikwa chakakurumbira.
Kanye West Biography Chokwadi:
Kanye detest paparazzi.
Chinhu chokutanga chaakatenga kubva patsika yebhuku rake rekutanga raiva aquarium.
Akabvuma pachena kuti aifunga nezvekuva nyanzvi yekusvibiswa kwefirimu.
Akachema misodzi paakaridza rwiyo rwakakumikidzwa kuna amai vake rwakanzi "hei mama" panguva yekonzati yake yekutanga muna 2007.
CHOKWADI KUTI: Vongai nekuverenga kwedu Kanye West Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!